Seziyaqala ukubonakala izithelo zozinzo eBaqulusini – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/Seziyaqala ukubonakala izithelo zozinzo eBaqulusini
Seziyaqala ukubonakala izithelo zozinzo eBaqulusini
Ubukhosi News September 28, 2017
IMeya uMnu uJerry Sibiya noSekela Meya uMnu uMncedisi Maphisa
SELUBUYILE uzinzo kuMasipala waseBaqulusini, obubhekene nezinkinga ngenxa yomdonsiswano obuqhubeka mayelana nobekufanele aqokelwe esikhundleni sokuba iMeya, nokudale ukuba umphakathi uqale ulahlekelwe yithemba. Lokhu kuvezwe iMeya yaseBaqulusini, uMnu uJerry Sibiya ngesikhathi exoxa nephephandaba uBukhosi, nalapho ebechaza khona kabanzi ngesimo sikaMasipala awuholayo.
“Siyafisa abantu bakithi babuyelwe yithemba manje ngoMkhandlu waBaqulusi ngoba ukudonsisana obekukhona sekuphelile, kuyasebenzeka futhi nozinzo luyabonakala ngoba wonke amakhansela amaqembu ehlukene abambisene kahle kakhulu. Ngikhuluma nje abaholi bomkhandlu okuyimi iMeya, iSekela okungukhansela uMncedisi Maphisa noSomlomo, iKhansela uMkhonyovu Khumalo sisebenza kahle kakhulu,” kusho uSibiya.
Ngaphandle kwalokhu, uchaze kabanzi ngezinhlelo anazo njengoba eseqede inyanga eqokelwe ukuba iMeya yaBaqulusi emva kwezinyanga kunomdonsiswano. Uthe okuphambili kuye ukuguqula isimo uMasipala obubhekene naso, obekuyizinkinga okubalwa kuzo ukungakhokhelwa kwezinkampani ebezisuke ziqashelwe ukwenza imisebenzi eyehlukene, ukuba nezikhundla ezibalulekile ebezingenabo abasebenzi abaqashwe kuzo ngokugcwele nosekuphele iminyaka eyisithupha.
Echaza uthe uhlelo lokuvala lezi zikhala seluqalile, wathi sebeqashe ngisho uMeneja kaMasipala omusha okunguMnu uBonga Ntanzi ozosingatha lonke uhlelo lokuqashwa kwezimeneja nabaqondisi beMinyango eyahlukene emkhandlwini. Uqhube wathi okunye akuhlelile ukuba aqinise ekuhanjisweni kwentuthuko kubantu ngoba abakholelwa nomkhandlu wakhe ukuthi kufanele uma uMasipala ulungisa izinkinga zangaphakathi abazificile bese kuphazamiseka intuthuko yomphakathi.
“Ngikhuluma nje isabelomali somkhandlu wethu iBaqulusini sigunyazwe ngaphandle kwezinkinga kungakapheli ngisho izinsuku eziyisithupha. Lesi sabelo sethu siyizigidi ezingama-R500. Kule mali sibala izigidi ezingama-R400 esiziqoqele zona njengomkhandlu, bese kuba ezingama-R100 esizithole emalini yesibonelelo sikaHulumeni. Kumanje siqale uhlelo lokufakela ugesi emawadini ehlukene njengoba sinikezwe izigidi ezili-R15 ezivela eMnyangweni wezokuMbiwa naMandla zokuba sifake ugesi kuWadi 5, Sibeke imali eyizigidi eziyisithupha ezogxila ekufakelweni kukagesi emizini eminingi. KuWadi -7 sibeke imali eyizigidi ezinhlanu yokuba kufakelwe imizi engama-200 ugesi. Asigcinile lapho kodwa kukhona nemizi yemindeni eyizi-2 300, esithathe isinqumo sokuba siyixhase ngogesi ngaphansi kohlelo lwalabo abaswele abangakwazi ukukhokha intela kaMasipala. Okunye ukuthi thina ugesi wethu ekuqaleni ubusidla izigidi ezili-R13 ngonyaka ekubeni inzuzo ebesiyenza ibiba yizigidi eziyisithupha kuphela. Nokho lokhu kuguqukile ngemuva kokuba namasu okulwa nokwebiwa kukagesi obekwenzeka koHlobane obekusidla izigidi ezine kanti edolobheni eVryheid besilahlekelwa izigidi ezingama-R20. Konke lokhu kuguqukile ngoba emalini esiyenzayo manje sesibuyelwa izigidi eziyisi-8 kusuka kweziyisithupha ebesizenza ngogesi,” kusho uSibiya.
Ubuye wathinta udaba lokusebenza komkhandlu, wathi sebeqalile balungisa indaba yokuthi izimoto zikaMasipala bayeke ukuziqasha kodwa bazithengele ezabo ngoba lokhu kudla imali eningi. Wenze isibonelo ngeminye iMinyango engaphakathi ikakhulukazi owakwaTechnical, ohlanganisa izimoto zezimo eziphuthumayo nezamanzi nokuthutha, wathi cishe zingaphezulu kwama-50 izimoto zakhona eziqashiwe.
“Uma ngingakwenzela isibonelo sinemishini yokulungisa umgwaqo eyisithupha esiyikhokhela imali eyizigidi ezili-R110 000 njalo ngenyanga bese kuthi ezinyangeni ezingama-36 zesivumelwano sichithe izigidi ezingama-29. Lokhu kuyasilimaza kakhulu ngoba ngale mali ngabe sazithengela eyethu njengoba uwodwa ubiza izigidi ezimbili kuphela,” kusaqhuba uSibiya. Akugcini lapho kodwa uSibiya uveze nokuthi njengoba bematasa nentuthuko ezindaweni eziningi zaseBaqulusini, baxhumana naMakhosi kanti bahlela nokuba bawakhele amaHhovisi ngoba uMasipala iBaqulusini unaMakhosi ezizwe ayisikhombisa.
Uthe okunye bafuna ukuqhakambisa ezokuvakasha ngokuthi bagxile ekuqhakambiseni umlando namagugu. Ubesho lokhu eveza nokuthi baneliba loMntwana uMkabayi kaJama abafisayo ukuba abantu balivakashele kodwa umphakathi awukaze unikwe ithuba lokufunda ngaye ukuthi wayengubani. Ezinye izinhlelo uzibale zabaningana kanti nasentsheni uthi bafuna ukwenza isiqiniseko sokuthi iyawathola amathuba okuzikhulisa ngokwamakhono ehlukene kanti ngisho osomabhizinisi uthi ubabeke phezulu ezinhlelweni zoMkhandlu.